Wararkii ugu dambeeyay: Cudurka Carona oo asiibay Wasiirka caafimadda UK iyo dhimashadii ugu badneed oo Talyaaniga lagasoo calaamadeeyay.
Wednesday March 11, 2020 - 08:51:30 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Markii ugu horrasay cudurka dilaaga ah ee Carona Virus ayaa laga helay wadanka Turkiga oo kamid ah dowladaha qaaradda Aasiya islamarkaana kaabiga ku haya Yurub iyo mandiqadda bariga dhexe.
Wasiirka caafimaadka xukuumadda Anqara ayaa warbaahinta usheegay in qof Ajnabi dalxiise ah laga helay cudurka Carona balse xaaladdiisa caafimaad ay wanaagsantahay waxaana ladhigay goob caafimaad halkaas oo lagu karaantiilayo.
Dowladda Kuuriyaha Koonfureed oo ah dalka sedaxaad ee dadka ugu badan ku dilay Carona Virus shalay waxaa ku dhintay 6 qof wuxuuna cudurkani asiibay illaa 60 qof, wasaaradda caafimaadka Kuuriyada Koonfureed ayaa warbixinteeda maalin laha ah ku sheegtay in dhimashada guud ee Carona ay gaartay 242 qof.
Dhanka dalka Talyaaniga dhimashadii ugu badneed maalin qura ayaa shalay lagasoo calaamadeeyay, guddiga caafimaadka dowladda Talyaaniga ayaa xaqiijiyay in shalay ay cudurka Carona udhinteen dad gaaraya 168 qof halka dadka cudurkan lajiifa ay kor udhaafeen 10149 qof.
Sidoo kale dowladda Ingiriiska ayaa xaqiijisay in cudurka Carona uu asiibay wasiirkeeda caafimaadka islamarkaana lageliyay xaalad Karaantiil ah, dowladda Faransiiska waxay iclaamisay in dad gaaraya 30 qof ay dalkeeda ugu dhinteen Carona waxaana dadka cudurkan la ildaran kamid ah wasiirka dhaqanka Faransiiska.
Faah Faahin: Khasaaraha ka dhashay dagaalkii Balcad iyo wararkii ugu dambeeyay.
Cudurka Carona oo 50,000 oo qof ku dilay wadanka Hindiya.